Madaxweyne Shariif oo boqolaal ruux Salaadii Ciida ku Tujiyay Masaajidka Isbaheysiga (Daawo-Sawirada)
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa boqolaal ruux isugu jiray Mas'uuliyiinta dowladda, Xildhibaanada cusub iyo dadweyne fara badan ayaa maanta Salaadii Ciida ku tujiyay Masaajidka Isbaheysiga, iyadoo ay aheyd markii u horeysay oo uu Madaxweynaha salaada Ciidul Fidriga ku tujiyo Masaajidka Isbaheysiga, tan iyo sanadkii 2006-dii oo uu xilligaas ahaa Hogaamiyihii Maxkamadaha dadweyne fara badan Salaada ciida ku tujiyay.
Inkastoo Ciidihii hore Madaxweynaha ku dukanayay Masaajidka Isbaheysiga, gaar ahaan Ciidihii Carafo, hadana Ciidul Fidrigan ayaa aheyd markii u horeysay isagoo Madaxweyne ah, waxaana uu Masaajidka ka aqriyay Khudbadii Salaadii Ciida oo uu kor ka aqrinayay markii hore Carabi ahaan.
Mas'uuliyiinta la dukaday Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ahaa Ra'iisul Wasaaraha C/wali Gaas, Xubno ka tirsan Golihii Wasiirada, Xildhibaano, Saraakiil ciidan oo isugu jiray kuwa AMISOM iyo dowladda, Safiirada dalalka deriska u fadhiya Soomaaliya iyo dad kale.
Ammaanka ayaa ahaa mid aad loo adkeeyay, waxaana dadka soo galayay lagu baarayay banaanka hore oo safaf dhaadheer ay galayeen, iyadoo dhowr meelood dadka lagu kala baarayay.
Safafka ugu horeeya ee Masaajidka ayaa waxaa ku dukanayay Mas'uuliyiinta dowladda iyo madaxda kale, iyadoo ay adkeyd in dadka caadiga ah inay tagaan, iyagoo qeybaha dambe ku dukanayay.
Ciidul Fidrigan ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ka baxeyso Marxalada kala guurka, iyadoo maalin ka hor ay tahay mudada ay ku egtahay dowladda KMG oo ku beegan maalinta berri ee 20-ka Agoosto, waxaana Mas'uuliyiinta dowladda la dhihi karaa hal meel ayay si macsalaameyn Salaadii Ciida ugu dukadeen.
Magaalada oo idil ayaa si guud ah looga ciidayay, waxaana lagu arkayay wadooyinka caruur aad u labisnaa oo raxan raxan u socday, kuwaas isticmaalayay bastooladaha iyo agabyada kale ay ku ciyaaraan.
Xalay ayay aheyd markii magaalada Muqdisho looga dabaal degay Ciida Buleyr cirka loo ganayay, iyadoo muddo labaatan sano kadib ay aheyd, waxaana dadka ay aad ula yaabeen dhawaaqa Baaruuda oo ay moodeen in Madfac la ridayay, waxaana dadka ay soo xusuusteen madaafiicdii sanad ka hor magaalada la isku weydaarsanayay.
Dhinaca kale waxaa iyana laga ciiday Gobolada Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo ay maamulaan inta badan Al-Shabaab, iyadoo fagaarooyin ku yaala magaalooyinka ay dadka ku dukadeen, waxaa ka mid ah Kismaayo, Marka, Baraawe, Jowhar, Buulo Burde, Baardheere, Buur-Hakaba iyo magaalooyinka dhowaan soo gashay gacanta dowladda ee laga saaray Shabaab, sida Baydhabo, Beledweyn, Xudur, Garbahaarey, Luuq, Beledxaawo iyo deegaano kale.